सावधान ! खाना खाने बित्तिकै यस्ता काम नगर्नुहोस् - ज्ञानविज्ञान
मानिस स्वस्थ रहनको लागि बिभिन्न कुराहरुमा ध्यान पुर्याउनु आवश्यक हुन्छ । त्यसैले तपाईले खाना खाने बित्तिकै कुनै पनि काम तुरुन्तै गर्नु उचित हुँदैन । जबकी तपाईले जतिनै पौष्टिक तत्व भएका खाना खाएपनि त्यसले शरीरमा नकारात्मक असर पार्छ ।
के के हुन् त ती कामहरु :
१. धुम्रपान नगर्नु :
खाना खाने बित्तिकै धुम्रपान गर्ने ब्यक्तिलाई ग्यास्ट्राइटिसको समस्या निम्त्याउँछ र पेटसम्बन्धी रोगहरु उत्पन्न गराउँछ ।
२. तुरुन्त फलफूल नखानु :
खाना खाएको तुरुन्तै फलफूलको सेवनले खानलाई दुषित गर्छ जसले शरीरमा उर्जा ९शक्ति० कम गर्छ । त्यसैले फलफूल खाँदा खाना खाएको आधा घन्टा पछि मात्र खानु उचित हुन्छ ।
३. चिया र कफि :
चिया तथा कफिमा एसिड बढी हुने भएकाले यसले शरीरमा प्रोटिको मात्रालाई नोक्सान पर्याउँछ जसका कारण खाना पचाउनमा समस्या निम्त्याउँछ ।
४. नुहाउनु :
खाना खाएको तुरुन्तै नुहाउँदा हात, खुट्टा तथा शरीरको अन्य भागमा रगतको प्रवाह बढ्छ र पेटको चारैतिर रगतको मात्रा कम हुन्छ जसले डाइजेस्टिव सिस्टमलाई कमजोर बनाउँछ ।
५. मर्निङवाक :
मर्निङवाक गर्नु त राम्रो हो तर खाना खाएर भन्दा हल्का खाना खाएको आधा घन्टा पछि मात्र मर्निङवााक गर्नु राम्रो हुन्छ जसले पेटमा एसिड बनाउन सक्दैन र शरीरलाई फाइदा गर्छ ।
हामीले खाएको खानेकुरा पेटमा जान्छ गएपछि पाचन भइसकेपछि चिनी बन्छ र पेटमा इन्सुलीन भन्ने हार्मोन उत्पादन हुन्छ। यसलाई पेन्क्रियाज भन्ने अंगले उत्पादन गर्छ। यो पेटको तलको भागमा हुन्छ। उत्पादन भएको इन्सुलीनले हामीले खाएर खानाबाट बनेको चिनी सबै अगंमा प्रवेश गराउने काम गर्छ।
जब हाम्रो शरीरमा इन्सुलीनको मात्रा कमी हुन्छ खाएको चिज जुन चिनी बन्छ तर त्यो शरीरका अंगहरुमा प्रवेश गर्न पाउँदैन। यही अवस्था हो सुगर भनेको।सुगर भनेको शरीरमा चिनीको मात्रा बढी भएको होइन, शरीरमा इन्सुलिनको मात्रा कमी भएको हो। सुगर भनेको गुलियो चिज खाएर लाग्यो भन्ने गर्छौ चिनी धेरै भएर लागेको रोग भन्छौ तर यो गलत हो।
सुगर भएको मानिसले गुलिया खान हुँदैन भन्ने होइन। एक चम्चा चिनी खादैमा केही फरक पर्दैन। जे खाए पनि पेटमा गएर बन्ने चिनी नै हो। चाहे गुलीयो चिज खानुहोस चाहे गुलियो नभएको खानेकुरा खानुस पेटमा गएर बन्ने चिनी नै हो।भात र आलु खान हुन्न भनिन्छ यो गुलियो भएर त होइन।
यसमा कार्बोहाइड्रेट धेरै हुन्छ। सुगर भएको बेला कार्वोहाइड्रेट भएको खाने कुरा नखाने होइन कम खाने तर धेरै पटक खाने गर्नुपर्छ ।सुगरमा के खाने कसो खाने भनेर सोच्न जरुरी छैन। हामीले बजारमा हेर्छौ सुगर फ्री बिस्कुट, सुगर फ्री केक, सुगर फ्री सेलरोटी भन्छौ, सुगर फ्री चक्लेट भन्छौ यो सबै नचाहिने कुरा हो।
हामीले गुलियो मात्रै सुगर भन्न भएन गुलीयो भनेको प्रत्यक्ष सुगर हो तर अरु कुरा अप्रत्यक्ष सुगर हो। त्यही भएर सुगर भएको बेलामा के खाने भन्ने प्रश्न होइनकी कति खाने भन्ने प्रश्न हो ।सुगर भएको मान्छेको लागि अलग्गै प्रकारको खाने कुरा जरूरी पर्देन। यस्तो चलन संसारमा छैन हाम्रो देशमा मात्रै किन यस्तो भनिएको छ।
यो सुगर फ्री, त्यो सुगर फ्री भनेर नचाहिने हल्ला गरिएको छ। यो, त्यो खानेभन्दा पनि कति खाने भन्ने सोच्नुपर्छ। थोरै खाने धेरै चोटी खाने तर के खाने भनेर सोच्ने होइन। रक्सी चुरोट खान भएन यो सबैलाई थाहा छ। बोसो चिल्लो खान भएन। चिनीबाट बनेका चिजहरु धेरै सकभर खान भएन। अरू जे खाए पनि हुन्छ। धेरै खाने होइन तर धेरैपटक खानुपर्छ।
सुगरको प्रमुख कारण जीवनशैली नै हो। हाम्रो खानपिन ठीक छैन। मान्छेहरू अल्छी भएका छन्। तरकारी लिन जान पनि गाडी र मोटरसाइकलको प्रयोग गर्छन। मोटोपन धेरै छ। खाना समयमा नखाने र एकै पटकमा धेरै खाना खाने गरिन्छ। खाना साथै सुत्ने बानी छ। व्यायाम गर्ने चलन छैन। तनावपूर्ण जीवन शैली छ।
यो बाहेक बंशाणुगत कारणले पनि सुगर हुन्छ। लापरबाही तरिकाले बिभिन्न किसिमका औषधि प्रयोग गर्दा पनि सुगर हुन्छ। पेटको रोगी, कलेजोको रोगी, पित्तको रोगी र पेन्क्रियाजको रोगी भएको मानिसलाई हुन्छ। रक्सी धेरै पिउनेलाई सुगरको खतरा हुन्छ। सबैभन्दा ठूलो कारण जीवन शैली नै हो। खाना धेरै खाने तर व्यायाम नगर्ने गर्दा सुगरको खतरा बढी हुन्छ।
सुगर हुनासाथ आत्तिनु पर्ने हुँदैन। यसले जिउन सिकाउँछ। मानिसलाई अनुशासित बनाउँछ। यसलाई कन्ट्रोल गर्न सकियो भने मानिसको आयु दस–पन्ध्र वर्ष बढ्छ। सुगर भएपछि म खत्तम भए केही गर्न सक्दिनँ भनेर सोच्न हुँदैन। रोग नभएको मान्छेले केही पनि परीक्षण गर्दैन।
तर सुगर भएको मान्छेले बेलाबखत शरीरको स्वास्थ्य परीक्षण गरेको हुन्छ। जसले गर्दा उसलाई के भइरहेको छ भन्ने थाहा हुन्छ र रोगको चाडो उपचार हुन्छ। सुगरको कन्ट्रोल गर्ने औषधिले र चिकित्सकले होइन यसको कन्ट्रोल बिरामी आफैंले गर्ने हो।जबसम्म बिरामीले चाहँदैन सुगर कन्ट्रोल हुँदैन। जतिपटक चिकित्सक कँहा धाए पनि जति औषधी खाए पनि यो कन्ट्रोल हुँदैन। यदी बिरामी स्वयम् सचेत भएन भने।
Don't Miss it दाँत सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्यालाई सहि समाधान गर्ने सय प्रतिशत प्राकृतिक र प्रभावकारी घरेलु औषधी
Up Next सकारात्मक सोंच, सफलताको आधार : प्रेरक भनाइहरु